Herintaona…Praiminisitra 5…Antso… | GAZETY_ADALADALA
Herintaona latsaka izao no niainan’ny Malagasy tao anaty krizy politika. Nifandimby ny fanendrena sy fanesorana praiminisitra tao anatin’izany. Raha tsy hiteny afa-tsy ireo 5 ireo isika ( tsy hoe manao tsinontsinona an’i Manandafy Rakotonirina akory).
Teo aloha i Charles RABEMANANJARA
nodimbiasan’i Monja ROINDEFO ZAFITSIMIVALO
dia niditra indray ingahy MANGALAZA Jean Eugene
izay nosoloin-dramatoa MANOROHANTA Cecile (mety hiditra anaty GUINESS des RECORDS, satria izy no filoha-na Governemanta nandalo tanaty fotoana fohy indrindra teto ambonin’ny tany angamba, tao anatin’izany andrim-panjakana izany)
ary ny farany rentsika izao dia ny Colonel CAMILLE Vital.
Ankoatry ny fanendrena ataon’ireo firehana telo nivory tetsy amin’ny Carlton.
Izany eo ihany, fa manararaotra ihany koa ny tena mandefa antso avo ho an’izay mahita sy mamaky ity lahatsoratra ity. Mandeha ny feo fa misy mikotrika zava-doza eto amin’ny tanàna.
Noho izany, rarao ny olona tinao, iangavio mafy tsy hamonjy ireny fiantsoana famoriam-bahoaka ireny aloha mandra-pahita izay tena marina.
Fa maninona moa no ataoko izao antso izao? Tsotra fotsiny, jereo tsara ny zava-nisy sy efa nitranga hatreto. Nisy ny fifamonoana, nisy ny nitondra takaitra mandra-maty. Noho ny inona? Noho ny fitiavan-tena ara-politikan’ireo tsy mataho-tody (tsy anavahako na iza na iza mpamari-toetra io). Tao ireto nasitrika mihitsy tanaty vatam-paty mba ho afaka mody teto Antananarivo. Tao ny nesorina ny faladihan-tongony. Tao ny nesorina ny sofiny. Tao ny natao an-keriny. Sy ny sisa tsy ho ary tanisaina. Nanomboka taiza ka hatraiza io? Isika rehetra no samy hamaly an’izay satria tafiditra ao anatin’io na ny raharaha 1991 (Ratsiraka vs HeryVelona), na ny 2002 (Ratsiraka vs Ravalomanana) sy ny 2009 (Ravalomanana vs Andry Rajoelina)
Fa raha sanatria ka hisy indray izany amin’ity indray mitoraka ity, dia ho fatifaty foana, ho maritiora foana (mba tsy hitenenako masiaka hoe toy ny fatin’alika) ny fatin’ny havanao, hiaro ny sezan’ireo mpanao politika ireo.
Haka ohatra akaiky dia akaiky aho: tsy misy tsy nahatsiaro ny zava-niseho tamin’ny 2002 niakaran-dRAVALOMANANA teo amin’ny fitondrana. Be ny anarana manamboninahitra nandrakotra ny pejy voalohan’ireo gazety mpiseho isan’andro, noho ny laza ratsiny tamin’ny fandraisany anjara tamin’ireny vono sy fandratrana ireny.
Rehefa tonga teo amin’ny fitondrana Ravalomanana, iza no nilaza fa ‘tsy hiantso azy mandrakizay hoe filoham-pirenena‘? Haintsika ny amin’izay. Nefa ankehitriny rehefa miresaka amin’ny haino aman-jery, dia manonona ihany ny hoe ‘prezidà Ravalomanana’, sa nibolisatra?
Fa nony tonga ny fitadiavana tombontsoa: adinon’izy ireny tsirairay avy ny ‘TAIM-BAVA’ nataony sy ny tsy fankatoavany ilay olona napetrany ho fahavalo. Marina fa misy ny teny Malagasy manao hoe ‘izay to fo mpamosavy‘, fa na izany aza…Dia nifanoroka, nifandray toy ny tsy nisy naninona. Navela tsy ho tsiahivina intsony, hono, ny lasa. Dia miara-dàlana indray. Angamba aza sady miteny am-po mangina ho an’ireo namoy ny ainy hoe: ‘ialahy isany no te-hiditra amin’ny lalao tsy an’laisany akory, Sakoa izay!’. Dia ankehitriny, na dia ireo olona natahorana fatratra noho izy ireo notondroin’ny mpifanandrina taminy ho nanao habibiana tsy roa aman-tany aza, dia tafiditra sy voatonona anarana ho ao anatin’ny fitantanana ity firenena ity ankehitriny.
Raha mba afaka niteny mantsy ny maty, na afaka nijoro indray ireny tapa-tongotra, na ireo very havana tsy hita maty, tsy hita velona, ka hanohitra ny zava-miseho ankehitriny, dia asa fotsiny izay hiseho.
Tsy sanatria fanetsehana ny ratra efa mikombona no ilazàko ireo rehetra ireo, fa fitiavana hisoroka ny antambo, sy tsy fitiavana hanan-dratsy intsony.
Ny rànao, na ny an’ny havanao latsaka, raha nisy vidiny teo imason’ireo olona rehetra mifofotra ny hisalotra indray ny anarana maha-mpitondra an’i Madagasikara ireo, dia tsy ho toy izao ny fiainanao Malagasy io. Saingy indrisy fa ny tany, hono, tsy ilaozan’adala, ka tsy maintsy hisy ihany, hisy foana ny ho voatarika hamaly ny antso. Hisy foana ny handeha hatao sorona (toy ny zanak’ondry, fa mba tsy ampondra aza) ka hovonoina, amin’ny anaran’ny tolona (ho fiarovana sa ho fitadiavan-tseza sy voninahitra!)
Raha azo atao ihany, AVADIHO (tsy impito fotsiny fa..) AN’ARIVONY ny fanapahan-kevitra vao handeha hamonjy an’itsy na iroa , amin’ny anaran’ny tolona. Raha tsy hoe efa tafiditra ao anatin’ireo olona tsy manan-kantenaina sy mamoy fo angaha ianao. Ka mety aminao foana na maty anio, na rahampitso, satria samy ho faty ihany no hiafarana.
Leo ny vahoaka, ekeko izany, nefa koa fadio ny tsy hiraharaha ny ara-politikan’ny firenenao. Na iza na iza no hampanao fifidianana eo, tongava mifidy maneho ny hafaliana na tsy hafalianao. Fa tsy efa vita ny fanisàna vao hikamenona. Tara loatra. Toy izay nitranga tany Alzeria fahiny nahatafakatra ny F.I.S teo amin’ny fitondrana, rehefa tsy niraharaha ny vahoaka. Tsarovy ny lasa, jereo ny ankehitrio, ary tsinjovy dieny izao ny hoavy. Tadidio mandrakariva fa manan-karena i Madagasikara, ary io harena io no mahatonga azy atao kilalao ankehitriny (na ambony izany, na ambanin’ny tany toy ny solika, na anaty ranomasina). Izany no mahatonga ireo hery sy firenena vahiny hitady izay mpitondra azo atao ‘Adiky ity! Gaosy itiky! Droaty itiky! sy azo kapohina rehefa maditra tsy azo tenenina (karavasiana), toy ny …
Filed under: anao ny fitenenana, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: 2002, Andry RAJOELINA, Camille vittal, Hery Velona, Manandafy, Mangalaza, Manorohanta, Monja roindefo, Rabemananjara, Ravalomanana, zafy albert |
« Praiminisitra miaramila: Albert Camille Vital Manangam-bovona… »
Peta, on 23/12/2009 at 8:03 said:
Sao dia tokony ny tenan’i rajoelina no miala sy esorina fa tsy PM no soloina lava eo ee???
Dia ahoana koa ity R/toa Ramialy manao Mada raid ity tenatsy menatra fa mangalatra depart sahady amin’ny propagande ooohhh, mampatsiahy ahy le olona iray taloha eeh